မကြာသေးမီက Google သည် ၎င်းရဲ့ တစ်နှစ်တာ သတင်းအချက်အလက်တွေရှာဖွေမှုစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၂၀ ဟာ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားသော နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်သူကမှ မကြိုက်ကြပါ။ သို့ပေမယ့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်ထဲမှာ လူတွေဟာ Google မှာ ဘယ်အရာတွေကို အများဆုံးရှာဖွေနေကြမလဲ?
အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ပဲ ၂၀၂၀ မှာတော့ Google ရှာဖွေမှုသမိုင်းမှာ ထိပ်ဆုံးနေရာကနေ အကြောင်းအရာ ၃ မျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတို့က Covid-19 , Black Lives Matter (BLM) လှုပ်ရှားမှုနှင့် အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကူးစက်ရောဂါပျံ့နှံ့မှုဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးပေါ်စာရင်းတွေကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုအတွက် ဆန္ဒပြသူတွေကို လှူဒါန်းရင် အာမခံငွေရှာဖွေခြင်းပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ အင်တာနက်ဟာ ယခင်နှစ်တွေကထက် ဆက်သွယ်မှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်တွေအတွက် ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိလာခဲ့ပါတယ်။
Google ကို တစ်ချို့ပေါ့ပါ့ပါးပါးမေးခွန်းလေးတွေ မေးကြသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဥပမာ – Zoom Meeting အတွက် ဘယ်လို Outfits လေးတွေဝတ်သင့်သလဲ? ပေါင်မုန့်ကို စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ဖြင့် အောင်မြင်အောင် ဘယ်လိုဖုတ်ရမလဲ? Carole Baskin က သူ့အမျိုးသားကို တကယ်သတ်ခဲ့တာလား? WAP ရဲ့ တကယ်အစစ်အမှန်အဓိပ္ပာယ်က ဘာလဲ? (ဟုတ်ပါတယ်၊ တကယ်တော့ WAP ဆိုတဲ့ စကားလုံးသည် ဒီနှစ်အတွက် ရှာဖွေမှုအမြင့်ဆုံးစကားလုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်)။ အခုမျှဝေပေးမှာကတော့ ယခုပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ အတွက် Google မှာ ရှာဖွေမှုအများဆုံးအကြောင်းအရာတွေကို မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
၃။ Kobe Bryant
၅။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများ
၇။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘယ်သူနိုင်သွားပြီလဲ?
၈။ Naya Rivera
၉။ Chadwick Boseman
၁၀။ PlayStation5(PS5)
၆။ Hurricane Laura
၇။ Super Tuesday
၉။ Murder hornet
၇။ BIPOC (Black, Indigenous & People of color)
၃။ Kamala Harris (Vice President of the United States)
၄။ Jacob Blake
၅။ Ryan Newman
၆။ Tom Hanks
၈။ Tom Brady
၉။ Kanye West
၁၀။ Vanessa Bryant
၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ဂူးဂဲလ်မှာ ရှာဖွေအခံရဆုံးအနုပညာရှင်များ
၁။ Tom Hanks
၂။ Chris D’Elia
၃။ Jada Pinkett Smith
၄။ Timothée Chalamet
၅။ Ricky Gervais
၆။ Amber Heard
၇။ Joaquin Phoenix
၈။ Danny Masterson
၉။ Ryan Dorsey
၁၀။ Lea Michele
၁။ Ryan Newman
၂ ။Tom Brady
၃ ။Bubba Wallace
၄။ Mike Tyson
၅။ Rudy Gobert
၆။ Drew Brees
၇။ Tyson Fury
၈။ Derrick Henry
၉။ Nate Robinson
၁၀။ Delonte West
၁။ Joe Biden
၂။ Kamala Harris
၃။ Boris Johnson
၄။ Pete Buttigieg
၅။ Mike Bloomberg
၆။ Andrew Cuomo
၇။ Chris Christie
၈။ Mike Pence
၉။ Andrew Yang
၁၀။ Mitt Romney
၃။ Black Panther
၄။ Harley Quinn: Birds of Prey
၅။ Little Women
၆။ Just Mercy
၇။ Bad Boys 3
၈။ Sonic the Hedgehog
၁၀။ Fantasy Island
တေးဂီတပညာရှင်တွေနှင့် Band များ
၂။ August Alsina
၄။ Doja Cat
၆။ Van Halen
၈။ Tamar Braxton
၉။ Quando Rondo
၁၀။ Tory Lanez
TV Shows များ
၁။ Tiger King
၂။ Cobra Kai
၄။ The Umbrella Academy
၅။The Queen’s Gambit
၆။ Little Fires Everywhere
၇။ Outer Banks
၉။ All American
၁၀။ The Last Dance